BlockLauncher 1.26.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.26.1 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား ကိရိယာမ်ား BlockLauncher
BlockLauncher ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Jelly Bean ကို ON ပုံမှန် MINECRAFT PE texture ဒီနည်းကိုလျှေက် BY မဝင်ရောက်နိုင်သေး! တစ်ဦးကသရုပ်ပြ texture pack ကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဤ application အချို့ SAMSUNG ကိရိယာဖြင့် Incompatibility IS! Samsung က Knox သို့မဟုတ်အခြားလုံခြုံရေးဖြေရှင်းနည်းများဖြင့် devices တိုက်ရိုက် Patch နဲ့ BlockLauncher ၏ ModPE Script ကို Runtime အကျိုးရှိစွာအသုံးချနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ .mod-format ချပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများနှင့် texture ကဒ် Patching နေဆဲအလုပ်လုပ်ကြသည်။ တစ်ဦးကပြင်ဆင်ချက်အပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့လျက်ရှိသည်။
BlockLauncher Minecraft PE ပတ်လည်မှာတွေဖြစ်ပါတယ်နှင့်ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ, texture ကဒ်နှင့် mods ၏ဓားစာခံများကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းထုံးစံ Minecraft PE launcher ဖြစ်ပါတယ်။
(ယခင်က MCPELauncher အဖြစ်လူသိများ)
ရုံ mods ရွေးပြီး, main screen ပေါ်မှာ Options ကိုရွေးချယ်ပါ။ ထိုသို့မလွယ်ကူပါ!
ဒီနည်းကိုအားလုံး device များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေ! ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ device နှင့်အတူပျက်သွားတာဆိုရင်, သင့်ရဲ့ device ကို model ကိုနှင့်ထောက်ပံ့မှုအတွက်သင့် operating system ဗားရှင်းနဲ့ဖိုရမ်ချည်မျှင်မှာတင်ထားတဲ့ဖတ်ရှုပါ။
ဒီ app ကို run ဖို့ MINECRAFT PE OF THE FULL VERSION လိုအပ်သည်။ ထို့နောက် DEMO version ကိုဒါမှမဟုတ် J ကိုဗားရှင်းမထောက်ပံ့ပါ။
က PocketTool နှင့် QuickPatch ၏ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန Patch ရဲ့အင်္ဂါရပ်နှင့်အတူ compatiable ဖြစ်သင့်ဒါကြောင့်ဒီပရိုဂရမ်ဝန်, Minecraft PE ၏လက်ရှိသွင်းမိတ္တူမှ libminecraftpe.so ။
Jelly Bean ကိုအသုံးပြုသူများ: လက်ရှိတွင်ဤလျှောက်လွှာကို Android 4.1 နှင့်အထက်အပေါ် Play Google က install လုပ်ထားတဲ့ Minecraft ၏မိတ္တူများထံမှမူရင်း texture load မနိုင်။ Built-in texture pack ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
-3ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများအထိ Patch
- built-in RepetiCraft texture ဗူးနှင့်အတူ texture pack ကိုထောက်ခံမှုစမ်းကြည့်
BlockLauncher အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
BlockLauncher အေပၚ စတိုး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
BlockLauncher အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
andronexus စတိုး 95.06k 24.79M
BlockLauncher ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း BlockLauncher အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.26.1
ထုတ်လုပ်သူ Zhuowei Zhang
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://gist.github.com/zhuowei/1f8f3f05eb8ea7d1de26
လက်မှတ် SHA1: AC:1B:94:AE:6D:29:70:43:5B:05:18:B7:81:0B:0E:94:E8:03:82:32
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Zhuowei Zhang
နယ်မြေ (L): Vancouver
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): British Columbia
BlockLauncher APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ